Spain Archive - Gool FM - page 5	twitter
Muxuu Luka Modric ka yiri inuu kulankiisii 200-aad xalay u saftay Real Madrid??
(Madrid) 13 Mar 2017. Tan iyo markii uu Real Madrid u saftay kulankiisii ugu horreeyay mar ay Spanish Super Cup ku wajaheen Barcelona 29-ka bishii August ee 2012, Luka Modric ayaa xalay kulankiisii 200 aad u saftay Los Blancos ciyaartii ay ka adkaadeen Real Betis.
Wadar ahaan, wiilka reer Croatia ayaa u saftay Madrid 131-kulan La Liga, 16-kulan Copa del Rey, 46-kulan Champions League, saddex kulan Spanish Super Cup, 2-jeer Supercopa d’Europa iyo labo jeer oo Club World Cup ah.
(Deportivo) 12 Maajo 2017 – Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa laga yaabaa inay wayso hoggaanka horyaalka La Ligaha Spain kaddib markii ay guuldarro 2-1 kala soo kulantay naadiga Deportivo La Coruna oo ay booqatay.
Deportivo La Coruna ayaa goolka la horreysay waxaana 40’daqiiqo dhammaadkii qeybtii hore u dhaliyey Joselu, kaddib markii kubbad uu soo tufay goolhayaha Barca uu si awood leh shabaqa u galiyey, sidaas ayaana lagu kala nastay kooxda martida ahayd ee Barcelona oo lagu hoggaaminayey 1-0.
Qeybtii labaad ee ciyaarta 
Real Madrid oo doonaysa inay dadajiso saxiixa David De Gea
(Madrid) 12 Maarso 2017 Kooxda Real Madrid ee dalka Spain ayaa doonaysa goolhayaha Manchester United ee David De Gea sida ay baahisay Mirror.
Real Madrid ayaa ka codsatay David De Gea inuu go’aan ka gaaro mustaqbalkiisa gaar ahaan inuu ku biirayo Real bilowga suuqa xaggaaga ee dhamaadka xiliciyaareed kan.
Kooxda reer Spain ayaa ka doonaysa De Gea in isbuuc ka hor bilowga bisha May laga doonayo inuu go’aansado ku biirida Real ama sii joogista kooxdiisa Manchester United.
Tababare Zidane ayaa dareensan in goolhaye Navas uu hoos 
Real Madrid oo lacago iyo waliba laacib muhiim u ah ku dooneysa Eden Hazard
(Europe) 12 Mar 2017. Real Madrid ayaa weli wada xiisaheeda ku aadan laacibka kooxda Chelsea ee Eden Hazard.
Jariiradda Mundo Deportivo ee ka soo baxda Spain ayaa qoreysa in Los Blancos lagu wado inay dalab wayn xagaaga ka gudbiso xiddiga reer Belgium .
Zidane ayaa lacag iyo waliba dhaliyihiisa Morata u bandhigi doona Hazard kaa oo 11-gool iyo afar caawin ah ka sameeyay 26-kulan uu Premier League ka soo muuqday kal ciyaareedkan.
Dhaliyaha reer Spain Alvaro Morata ayaa kol hore lala xiriirinayay gegada 
Cristiano Ronaldo oo mar dhow filanaya labo Wiil oo mataano ah
(Madrid) 12 Maajo 2017 – Ilo wareedyo ku dhow dhow qoyska Cristiano Ronaldo ayaa xaqiijinaya in weeraryahanka kooxda Real Madrid uu dhowaan filanayo in uu Aabe u noqdo labo carruur ah oo mataano ah.
Ronaldo ayaa iminka saaxiib la ah gabadha lagu magacaabo Georgina Rodriguez, laakiin waxaa xaamilo u ah oo dhali rabta gabar aan la aqoon oo ka soo jeeda America.
Hooyada lacagta lagu siiyay inay uurka ku qaado ilmaha Ronaldo ayaa la warinayaa inay goor dhow dhali doonto labo mataano 
Waa maxay sababta Andres Iniesta uu dib ugu dhigay heshiis kordhinta Barcelona?
(Barcelona) 12 Maarso 2017 Kooxda Barcelona ayaa wada qorshe ay heshiis cusub uga saxiixayso ciyaartoydeeda ugu muhiimsan xiliciyaareed kan.
Waxaana ugu danbeeyay Rakitic oo kooxdu ay ka saxiixday heshiis dhacaya ilaa June 2021, kooxda ayaana haatan diirada saaratay heshiis kordhinta Messi, Iniesta iyo Ter Stegen.
“Kadib heshiis kordhintii Rakitic, Barcelona waxay beegsanaysaa heshiis kordhinta Andres Iniesta, Lionel Messi iyo goolhaye Ter Stegen ka hor dhamaadka xiliciyaareedka” ayeey soo qortay Mundo Deportivo.
Wargayska ayaa intaa ku daray in kooxdu ay u soo bandhigtay Andres Iniesta heshiis dhacaya ilaa 
“Waali ayeey noqon doontaa inaan badalo go’aankeyga kadib kulankii PSG” – Luis Enrique
(Barcelona) 11 Maarso 2017 Tababaraha kooxda Barcelona ee Luis Enrique ayaa ka hadlay inuu badalayo ra’yigiisa kadib guushii ay ka gaareen kooxda PSG.
Enrique ayaa silama filaan ah u shaaciyay inuu katagi doono Barcelona dhamaadka xiliciyaareed kan, laakiin saxaafada ayaa soo jeedisay inuu ka laaban karo go’aankiisa kadib mucjisadii PSG.
Laakiin tababaraha reer Spain oo la hadlay saxaafada ka hor kulanka barri ee Deportivo ayuu sheegay inay waali noqon doonto inuu badalo go’aan uu horay u qaatay.
“Ma jiro wax isbadalay, waxay ahaan doontaa 
Walaalka la dhashay Mascherano oo sheegay in laacibku uu katagi doono Barcelona (Kooxdee ayuu ku sii jeedaa?)
(Barcelona) 11 Maarso 2017 Wiilka ka wayn daafaca kooxda Barcelona ee Javier Mascherano ayaa sheegay in laacibku uu katagi doono kooxda reer Spain.
Sebastian Mascherano ayaa sheegay in walaalkiis uusan kubadda uga fariisan doonin kooxdiisa haatan ee Barcelona, wuxuuna cadeeyay inuu dib ugu soo laaban doono Argentina.
Sebastian ayaa cadeeyay in Mascherano uu kubadda uga fariisan doono kooxdiisii hore ee River Plate oo ah kooxdii uu ku soo baxay.
“Waxaan idiin xaqiijin karaa in Mascherano uu dib ugu soo laaban doono Argentina si uu 
Zidane oo diiday inuu ka hadlo guushii Barcelona ay ka gaartay PSG
(Madrid) 11 Maarso 2017 Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa diiday inuu ka hadlo guushii Barcelona ay ka gaartay kooxda reer France ee PSG.
Barcelona oo lugtii hore looga soo adkaaday 4-0 ayaa ku adkaatay kulankii lugta labaad 6-1 taas oo ka dhigtay inay si mucjiso leh ku soo baxdo.
Mundo Deportivo ayaa daaha ka qaaday in tababare Zidane uu diiday inuu ka hadlo wixii ka dhacay arbacadii garoonka Camp Nou.
Mar la waydiiyay in Barcelona ay noqotay koox qatar badan kadib 